Njikọ Ntanetị 41: TAG Heuer na-ewetara obere smartwatch | Gam akporosis
TAG Heuer gosipụtara ụdị nlele ọhụụ ọhụụ. Ọ bụ ihe onye nọchiri na Modular ejikọtara. Na ụdị ọhụrụ a, akara ahụ na-achọ imeziwanye arụmọrụ nke usoro gara aga. Na mgbakwunye, e mekwara ya maka obere nkwojiaka ya na nbelata ya. Ebe ọ bụ na n'okwu a ọ nwere a 41 mm n'obosara okirikiri. Bia Njikọ Ntanetị 41.
Ọ bụ otu afọ gara aga mgbe TAG Heuer sooro Intel mekọrịta ma mepụta Njikọ Njikọ 45. Akpọsara ya maka ihe ọ bụ, arụmọrụ dị elu, okomoko smartwatch. Ma, n'ihi oke ya, ọ dị nnukwu na ọtụtụ nkwojiaka. Yabụ, ha ugbu a ẹkedori a ubé nta nlereanya.
Echiche na nke a Ejikọtara ya na Modular 41 bụ iji melite arụmọrụ nke elekere gara aga ma chee usoro dị ọtụtụ. Ebe ọ bụ na ekele maka obere nha ọ bụ elekere dị mma maka ọtụtụ ndị ọrụ. Yabụ na ọ dị ka TAG Heuer jisiri ike kụọ igodo aka nri n'oge a.
E gosiputala nkọwapụta nke nkọwapụta nke Mods 41 Ejikọtara. Ya mere, smartwatch a enweghị ihe nzuzo maka anyị. Ndị a bụ nkọwa ya:
Kpọọ na dayameta nke 41 mm
390 x 390 pixel mkpebi
Ihuenyo nziwanye nke oma
Nchekwa: 8 GB
Njikọ GPS na NFC
Mmiri na-eguzogide mmiri (nwere ike ịbanye n'ime mmiri ruo mita 50)
Kwekọrọ n'Ozizi na gam akporo igwe 4.4 na n'elu yana iOS 9 na n'elu
O nwere eriri 9 dị iche iche iji jikọọ na nche
Nkwado maka Google Play
O doro anya guzo ọtọ maka ịbụ ụdị zuru oke karịa onye bu ya ụzọ. Dịka ọmụmaatụ ha amụbawo ikike nchekwa na nke a. Na mgbakwunye na imezi mkpebi na nchapụta nke ihuenyo. Nkọwapụta nke na-eme nke a Jikọọ Modular 41 bụ otu n'ime nche kachasị mma na nso ya.
Dị ka atụ anya, ụdị TAG Heuer a apụtaghị na ọ dị ọnụ ala. Ebe ọ bụ na e kpughere ọnụahịa ọnụahịa nke smartwatch. Ọnụahịa nke Modular ejikọtara na 41 bụ $ 1.200. Ọnụahịa nke na-agbaso usoro nke mbụ na ika.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Ejikọtara Modular 41: Ọhụrụ TAG Heuer